Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo looma maxkamadeyn doono eedihii kufsiga | Xaysimo
Home War Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo looma maxkamadeyn doono eedihii kufsiga
Waxaa la sheegay inay 2010-kii xiddigan Portuguese-ka u dhashay heshiis ku gaareen meel aan maxkamad ahayn, hasayeeshee ay inantu go’aansatay inay kiiskaasi dib u furto 2018-kii. Ciyaaryahanka eedahaasi waa uu iska fogeeyay.
Bayaan la soo saaray Isniintii, ayaa dacwad oogayaasha magaalada Las Vegas waxa ay ku sheegeen in eedahaasi “uusan shaki kujirin inaan caddeyn loo hayn”.
Karaaniga Xeer Ilaaliyaha degmada ayaa sheegay in dhibanaha ay xadgudub loo gaystay soo tabisay 2009, hasayeeshee ay diiday inay sheegto goobta ay arrintaasi ka dhacday ama cidda weerrarka u gaysatay. Sidaas daraadeed booliska uma aanay suuragelin “inay sameeyaan baaritaan wax ku ool ah”.
Hasayeeshee bayaanka ayaa lagu sheegay: “Inaguu ku salaynayna xogta aan waqtigan dib u eegnay, eedaha tacaddiyada galmo ee ka dhanka ah Cristiano Ronaldo shaki kuma uu jiro inaan caddeyn loo hayn. Sidaas daraadeed ma ay jirto wax dacwad ah oo la soo oogayo.”
Ronaldo ayaa July-dii la soo dhaafay waxa uu u wareegay kooxda Juventus. Waxa uu ku guulaystay biladda ciyaaryahanka ugu wanaagsan calaamka ee Ballon d’Or ee sanadihii 2008, 2013, 2014, 2016 iyo 2017.